Jamaahiirta Juventus oo codsi muhiim ah u diray tababaraha kooxdooda Massimiliano Allegri – Gool FM
Jamaahiirta Juventus oo codsi muhiim ah u diray tababaraha kooxdooda Massimiliano Allegri
Dajiye October 31, 2018
(Juventus) 31 Okt 2018. Macalinka kooxda Juventus Massimiliano Allegri oo ay la socdaan dhowr ciyaartoy ee kooxdiisa ah ayaa ka qayb galay xaflada sanad-guuradii koowaad ee kasoo wareegtay xiligii la furay goob lagu iibiyo tikidhada.
Wargeyska “TuttoSport” ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in ku dhawaad 1000 taageerayaal ah ee kooxda Juventus ay ku sugnaayeen goobta ay xaflada ka socotay, waxayna ku dhawaaqayeen “inoo keen koobka Champions League”.
Dhankiisa Massimiliano Allegri ayaa wuxuu u jawaab celiyay jamaahiirta kooxda Juventus ee xaflada ku sugnayd wuxuuna yiri.
“Waxaan u mahad celinayaa qof kasta ee ka mid ah jamaahiirtan cajiibka ah, guulahan waxaan kaga mahad celineynaa ciyaartoyda ku sugan gudaha garoonka, waxaan rajeyneynaa inaan inbadan ku qanacsanaano”.
“Xili ciyaareedka wali waa bilaw, waxaan rajeyneynaa inaan gaarno, ujeedooyinkeena xili ciyaareedkan”.
Goobta xaflada ayaa waxaa lagu arkay dhowr ciyaartoyda kooxda Juventus ka tirsan waxaana ka mid ahaa: Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Blaise Matuidi, Douglas Costa, Giorgio Chiellini, Miralem Pjanić iyo kuwa kale.
Toni Kroos oo fariin qiiro leh ku macsalaameeyay macalinkii hore kooxda Real Madrid Julen Lopetegui
Ka bogo dhamaan kulamada caawa laga ciyaari doono tartamada Carabao Cup, Copa del Rey iyo Italian Serie A